OPDOn nama kilaashi hidhate qaburraa gara kitaaba hidhate qabutti ‘tarkaanfate’ jira. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOPDOn nama kilaashi hidhate qaburraa gara kitaaba hidhate qabutti ‘tarkaanfate’ jira.
OPDOn nama kilaashi hidhate qaburraa gara kitaaba hidhate qabutti ‘tarkaanfate’ jira. Gadi-lakkiisaa mucaa kana, waan fedhe barreesun mirga isaati.
Bukoo kana dhaga’aa! Dargaggoon argitan kun Amaanu’eel Balaay jedhama. Afaaniifi aartii Oromoofin gumaacha jedhee bu’aa ba’ii baay’ee booda kitaaba mata dureensaa “YOOMILAAN” jedhu maxxanse. Kitaaba kanas guyyaa har’aa eebbisiisuuf sagantaa qopheeffate. Fagoofi dhiyoorraa keessummoota waaammatee, keessummoonni isaafi deeggartoonni aartii Oromoo magaalaa Naqamtee galma hoteela #Shaalomitti wal ga’an. Sagantaan eegaluudhaaf yommuu jedhu qaamni mootummaa poolisiidhaan deeggaraman dhufanii mucaa kana qabanii deeman. Qophiin qophaa’e hunduu duwwaatti hafe. Uummanni gaddaan deebi’ee manasaatti gale.
Maal jedhama amma kun? Waan kaleessa yaalamee bu’aa fiduu dadhabe, faashinii barri itti darbe akkasii maaf yaaltu? Artistiifi barreessitoota Oromoof kabajaafi gumaata malee roorroon akkasii hin maluuf! #Amaanu‘el hattattamaan gadhiifamuu qaba!
Barataa Amaanu’eel Balaay Kitaaba Asoosama#YOOMILAN Jedhu osoo Barataa ta’ee Jiruu Barreessee Xumuratee ture. Guyyaa har’aa June/9/2019 Magaalaa Naqamteetti eebbisiisuuf Qophiirra osoo jiruu qabamee humna Mootummaatiin hidhame!
Mootummaa nama baratee Barreessee dhaloota barsiisu hidhutu biyya gaggeessa! Raffisaa Taammanaa Guutuu
Abbaan Gadaa Booranaa siyaasa keessa seene laaqu jalqabe? Lafa aanaa 4 gahu kan Somaalen fudhatame deebisisu dhiise qarshii mootummaatin aango ummataatti taphataa jira fakkaata.